Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao havaozina » Mampiray ny mahery fo DC sy ny mponina ao aminy amin'ny alàlan'ny lalao finday
Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Vaovao havaozina
Tonga amin'ny 2022 ny lalao finday RPG piozila voalohany ahitana tarehin-tsoratra DC malaza ary misokatra ho an'ny pre-gesitrations izao.
Ludia, mpamorona fialamboly amin'ny finday, Ludia, studio Jam City, dia namoaka ny DC Heroes & Villains, ilay kilalao milalao piozila (RPG) match-3 voalohany ao amin'ny Universe DC, nahazoan-dalana avy amin'ny Warner Bros. Interactive Entertainment amin'ny anaran'ny DC. Ny lalao dia hampifaly ireo mpankafy ny tantara an-tsary DC miaraka amin'ny fitantarana tany am-boalohany ahitana mpilalao kintana rehetra amin'ny Super Heroes sy Super-Villains malala, anisan'izany i Batman, Superman, Wonder Woman, the Joker ary Harley Quinn. DC Heroes & Villains dia ho hita eran-tany amin'ny fiandohan'ny taona 2022 ao amin'ny App Store sy Google Play. Manomboka anio, ny mahery fo sy ny olon-dratsy dia afaka misoratra anarana mialoha ho amin'ny fidirana amin'ny lalao ary mahazo tombony manokana amin'ny fanombohana, ao amin'ny www.dcheroesandvillains.com.
Manasongadina fitantarana manankarena sy tany am-boalohany, ny DC Heroes & Villains dia mitondra toerana malaza toa ny lalan'ny Gotham City sy ny halalin'i Atlantis. Ny pulse mistery dia nanala ny hery lehibe rehetra ary anjaran'ny mpilalao ny haka ny ekipa matanjaka indrindra, avy amin'ny andaniny roa amin'ny fitsarana, mba hialana amin'ny faharinganana tanteraka.
Ny mpilalao dia mila stratejika rehefa mivezivezy amin'ny lalao mahery vaika an'ny DC Heroes & Villains, feno ady amin'ny mpilalao tokana mifanandrify-3 sy hetsika ataon'ny ekipa izay ilain'izy ireo hanangona ny mpiara-miasa aminy handresy ireo lehibeny hahazoana valisoa mahafinaritra. Ny hetsika mivantana voalahatra ao anatin'izany ny lalao PVP sy ny Guild Raids dia hitondra ireo mpankafy DC avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hiara-miady mba hahazoana valisoa manokana amin'ny lalao.
"Faly tokoa izahay manambara ny anaram-boninahitray vaovao, DC Heroes & Villains," hoy i Alex Thabet, Tale Jeneralin'ny Ludia. "Ity lalao ity dia mampiseho ny tsara indrindra amin'ny Ludia, miaraka amin'ny lalao mahasarika sy teknolojia vaovao izay mampiavaka ny lalao nahazo loka. Mino izahay fa hanome fomba fijery vaovao tanteraka amin'ireo mpilalao, tontolo iainana ary lore tian'izy ireo ny mpankafy DC.
"Tsy afaka ny ho talanjona kokoa izahay amin'ny DC Heroes & Villains, izay mampiseho ny talentan'i Ludia sy ny fahaiza-mamorona amin'ny endriny feno," hoy i Chris DeWolfe, mpiara-manorina sy Tale Jeneralin'ny Jam City. "Ity no fotoana voalohany ahafahan'ny mpankafy DC mamorona ekipa nofinofiny manokana amin'ny lalao lalao-3 lalao, manambatra ny mahery fo sy ny olon-dratsy. Matoky aho fa ho variana amin'ny zavatra azony atao amin'ny lalao ny mpankafy. "
Jam City vao haingana no nahavita ny fahazoana an'i Ludia tamin'ny Septambra 2021, nanohy ny fanatanterahana ny iraka ataon'ny orinasa hanamafisana ny portfolio-ny eran-tany amin'ireo studio ambony izay mamolavola sy mamoaka lalao miorina amin'ny IP izay novolavolaina anatiny sy ny antoko fahatelo nahazoan-dalana.